July 21 Israel Le Palestine (Update) ~ Thu Tatuam (Siyin News)
July 21 Israel Le Palestine (Update)
9:45 AM Israel Taw Kisai No comments
Telthiam tu ngetna : Israel te Pathian ii panpuina Kawlte zonghna hesak nuam ka hi ciang, Kawlkam taw aat zaw ing, Kawllai Sizaanglai , lai nam2taw aat tu hun kicing zo ngawl. Athupi teng sia Sizaanglai taw ma aat tong.
(Israel က မြန်မာပြည်ထက် သုံးနာရီခွဲနောက်ကျပါတယ်) (From Jerusalem Post Live Blog)
11:13 p.m. Nahal Oz ဒေသတွင် ပစ်ခတ်မူဖြစ်ပွား
11:02 p.m. Beersheba သို့ ဟားမာစ်များ ပစ်လိုက်သည့် ဒုံး ၇ လုံးကျရောက်
10:45 p.m. အချက်ပေးဥသြဆွဲ Beersheba.
10:16 p.m. Ashkelon သို့ ပစ်ခတ်သည့် ဒုံးများ ဖျက်ဆီးနိုင်
9:58 p.m. Ashdod နှင့် Ashkelon တွင် ရန်သူပစ်ခတ်နိုင်ကြောင်းဥသြဆွဲ
9:57 p.m. Tel Aviv သို့ ပစ်ခတ်သည့် ဒုံးများ ဖျက်ဆီးနိုင်
9:47 p.m. U.S. Secretary ကိုင်ရိုသို့ရောက်ရှိ
9:11 p.m. Negev စာသင်ကျောင်း သို့ ရော့ကဒ်များ ကျရောက်
8:55 p.m. USA အိမ်ဖြူတော်မှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Josh Earnest က Israel သည် မိမိကိုယ် မိမိ ခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်ရှိ
6:57 p.m. Rishon Lezion, Holon , Bat Yam in နှင့် Dan Region ဒေသများတွင် အရေးပေါ်သတိပေးသည့် ဥသြဆွဲ
6:52 p.m. ShfelaAshdod, Rehovot, Nes Ziona, Ramle နဲ့ Lod ဒေသတွေကို ဟားမာစ်က ပစ်ခတ်နိုင်ကြောင်း သတိပေး ဥသြဆွဲ
6:36 p.m. အိမ်ဖြူတော်မှ အိုဘားမား အနေဖြင့် သေဆုံးသောသူများ တိုးလာသည့် အတွက် ဝမ်းနည်းရပါကြောင်း Israel အနေဖြင့် မိမိကိုယ် မိမိ ခုခံကာကွယ် ပိုင်ခွင့် အပြည့်အဝ ရှိနေပါကြောင်း ပြော
6:33 p.m. Mateh Regional Council သို့ ဟားမာစ်များ ပစ်ခတ် သေဆုံးသူမရှိ
6:32 p.m. Ashkelon သို့ ဟားမတ်များ ပစ်ခတ်သည့် ဒုံးကြောင့် ကားနှင့် နေအိမ် အချို့ ပျက်ဆီး လေးဦး အားကုသ
6:26 p.m. Egypt အား ကြားဝင်ပေးရန် နိုင်ငံတစ်ကာ မှတိုက်တွန်း နေချိန် ပါလက်စတိုင်းတို့သည် ငြိမ်းချမ်းရေးကို မလိုလားကြောင်း အီဂျစ်ခေါင်းဆောင် သုံးဦးမှ ရိုက်တာ သတင်းထောက်အား ပြော
6:12 p.m. Nazareth မြိုတွင် လူ ၃၀၀၀ ခန့် Israel အား ဆနပြ ၂၀၀ ဦး မျက်နာ ဖုံးစွတ်ထား၊ ထိုသူများသည် Israel ရဲများအား ခဲများဖြင့် ပေါက် ၊ တစ်ဦးသာ ဖမ်းဆီး စစ်ဆေး
5:50 p.m. ကျဆုံးသွားသော Israel ဗိုလ်မူး Major Tzafrir Bar-Or အား မြေမြုတ်သင်္ချိုလ်
5:48 p.m. အရေးပေါ် သတိပေး ဥသြသံများ ဖြင့် Ashkelon မြို့တွင်ဆူလောင်
5:37 p.m. ဘန်ကီမွန်း က ဂါဇာကိစ အီဂျစ်ခေါင်းဆောင်နှင့် စိစိ နှင့် ဆွေးနွေးရန် ကိုင်ရိုသို့ရောက်
5:30 p.m. Israel တောင်ဖက် ဗိုလ်မူးချုပ် Sami Turgeman က ယနေ့တွင် လိုင်ခေါင်း များ ထပ်မံ ရှင်းလင်းပြီး စစ်ဝတ်စုံဝတ် Hamas ဒါဇင်များစွာအား အချိန်မှီ ဟန့်တား နိုင်ကြောင်း ၊ လိုင်ခေါင်းများသည် ရူတ်ထွေးလှပြီး နည်းပညာ များ တပ်ဆင်ထားကြောင်း သို့သော်လည်း ဖျက်ဆီးပစ် ခဲ့ကြောင်းပြော
5:15 p.m. လွန်ခဲ့သည်လက ဥကဌ ဖြစ်လာ သည့် Hatnua အဖွဲ့ Meir Sheetrit တနင်္ဂနွေ တစ်ရက်တည်း မှာ ပင်ပါလက်စတိုင် ဖက်မှ ၂၆၀ ဦး သေဆုံးသည်ကိုပင် နိုင်ငံတစ်ကာက ဥပကာ ပြုထားနေကြောင်း ပြော အာဖဂန်၊ အီရတ် နှင့် ဆီးရီးယားကဲ့သို့ အမေရိကန်နှင့် အပေါင်းပါများ လုပ်ဆောင်နေဟုပြော
5:12 p.m. Israel ရဲ့ Gan Yavne, Gedera, Yavne နဲ့ Kiryat Malachi တွေဒုံးနဲ့ ပစ်ခတ်ခံရပေမဲ့ သေဆုံး ဒဏ်ရာ မကြားသေးပါဘူး
5: 02 p.m. Ashekelon ကို ရော့ကတ်နဲ့ ပစ်မယ်ဆိုတဲ့ သတိပေးသံကြားရ
4:00 p.m. Israel ရဲ့ Ashkelon ကမ်းခြေ ကောင်စိရုံး ပစ်ခံရပေမဲ့ မပြောပလောက်
3:51 p.m. Gaza မြောက်ဖက် Shejaia ဒေသ ကနေ Hamas တွေက ဆေးရုံ၊ ဗလီ၊ အားကစားကွင်းတွေက နေ နေရာယူ ပစ်နေတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ Israel ထုတ်ပြ
3:49 p.m. Sha'ar Hanegev ကောင်စီ ဒေသကို Hamas ကပစ်ခတ်ပေမဲ့ သေကြေမူ့ မရှိ
3:47 p.m. ဟားမာစ်တွေက Al-Aqsa ဆေးရုံ ရဲ သုံးလွှာ ကို ပစ်စင် နေရာယူနေ တော့ Israel တင့်ကားတွေ က အဲဒီနေရ ပစ်ခတ်ရာမှ ၄ ဦးသေ ၁၆ ဦး ဒဏ်ရာရ
2:30 p.m. UN က Palestine တွေကို ဖြောင့်ဖြ ဖို့ အီဂျစ်နဲ့ ပါကစ်စတန် တွေကို တိုက်တွန်းနိုးဆော်
1:55 p.m.4Ashkelon ကို ဒုံးလေးစင်းနဲ့ ဟားမာစ်က ပစ်ပေမဲ့ အားလုံး ဖျက်ဆီးခံ Sha'ar HaNegev ကျတဲ့ ဒုံးတွေ ကွင်းပြင်ထဲကျ
1:36 p.m. Ashkelon သို့ Hamas မှ ပစ်ခတ်သော ဒုံးအား အောင်မြင်စွာ ဖြိုခွင်း
1:20 p.m. Ashkelon တွင် အရေးပေါ်ဥသြဆွဲ
1:19 p.m. Sdot Negev ဒေသ သို့ ဒုံး ကျရောက်ပေါက်ကွဲ သေဆုံး ဒဏ်ရာရသူမရှိ Ashkelon သို့ပစ်ခတ်သော ဒုံးအား တန်ပြန် ဖြိုခွင်း
1:13 p.m. Ashdod, Be'er Tuvia နဲ့ Ashkelon ကမ်းခြေ အရေးပေါ် ဥသြဆွဲ
12:34 p.m. Be'er Tuvia, အပြင်ဖက်မှာ ဒုံး တစ်လုံး Ashkelon နားမှာ ဒုံး တစ်လုံး ပေါက်ကွဲပေမဲ့ သေဆုံးသူမရှိပါဘူး
10:02 a.m. တညလုံး တိုက်ပွဲကြောင့် Israel ဖက်က ၁၅ ဦး ဒဏ်ရာရ ၊ ၂ ယောက်ပြင်းထန်၊ တစ်ယောက် အတော်အသင့် ဒဏ်ရာရ ၁၂ ယောက် ဒဏ်ရာ မပြောပ၊ (Israel Army Radio reported)
9:36 a.m. Israel Nir Am , Sderot, နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသတွင် အရေးပေါ် ဥသြဆွဲ
9:10 a.m. ကျဆုံးသွားသော Is...rael ဖက်မှ ၁၃ ဦးအနက် ၆ ဦးမြောက်၏အမည် ထုတ်ဖော်
9:09 a.m. Hamas ၁၀ဦး သတ်ဖြတ် ရှင်းလင်း၊ ၂ ဦးမှာ မြေအောက်ကျင်းမှတဆင့် Israel ဖက်သို့ ဝင်ရောက်ရန်ကြိုးပမ်းနေစဉ်
8:50 a.m. Gaza ကနေ Israel ဖက်ကို ကျွံဝင်လာတဲ့ မြေအောက်လိုင်ခေါင်း အချို့ကို ထပ်မံ ဖျက်ဆီးနိုင်တယ်လို့ Israel ကြေညာ
8:00 a.m. Eshkol ဒေသသို့ Hamas မှ ပစ်ခတ်သော ဒုံး နှစ်စင်းအား Israel Dome မှ အောင်မြင်စွာ ပစ်ခတ် ဖျက်ဆီး
7:57 a.m. Sha'ar Hanegev ဒေသအတွင် ဂါဇာသို့ သွားသောလမ်းများ ရဲတပ်ဖွဲ့မှ လုံခြုံရေးအရ ပိတ်ဆို့
7:51 a.m. Eshkol Regional Council မှ အရေးပေါ် ဥသြဆွဲ
7:15 a.m. Gaza မြောက်ပိုင်းက တနင်္ဂနွေ ည နက်ပိုင်းနဲ့ တနင်္လာ မနက်တိုက်ပွဲ Hamas နယ်မြေအတွင်း ပြင်းထန်စွာဖြစ် Hamas ၁၀ သေဆုံး ၂၀ ဦး အရှင်ဖမ်းဆီး မေးမြန်းမူ ပြုလုပ် ၊
မြေအောက်လိုင်ခေါင်း အချို့ ထပ်မံ စိးနှင်း သိမ်းပိုက်
Israel သုံးဦး ဒဏ်ရာရ လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မူကြောင့် Hamas ရဲ့ Unit ခေါင်းဆောင် တစ်ယောက် သတ်ဖြတ်ကြောင်း Israel ဖက်မှပြော
6:50 a.m. ထိခိုက် သေဆုံး ဒဏ်ရာရသူများ တိုးများ လာသောကြောင့် အပစ်အခတ်များ ချက်ခြင်း ရပ်ရန် လုံခြုံရေးကောင်စီ ၁၅ ဦး အစည်းအဝေးမှ တောင်းဆို
5:15 a.m. Israel ရဲ့ U.N. Ambassador Ron Prosor က UN Security Council အရေးပေါ်အစည်း အဝေးမှာ "အဖြေကတော့ ရိုးရိုးလေးပါ Israel ဖက်ကို ကျလာတဲ့ ဒုံးကျည် တွေ မရှိတော့ဘူး ဆိုယင် Gaza ဖက်မှာ လဲ အေးအေးဆေဆေး ဖြစ်သွားမှာပါ ၊ Israel အနေနဲ့ အပစ်အခတ် ရပ်ဖို့ သုံးကြိမ် တိုင်...တိုင် သဘောတူခဲ့ပေမဲ့ Hamas ကငြင်းဆိုခဲ့ပါတယ်"
5:10 a.m. Israel ရဲ့U.N. Ambassador က ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ စစ်သား မရှိလို့ UN မှာ... ပြော
4:00 a.m. Palestinian ကျန်မာရေးဌာနမှ Palestine ဖက်မှ သေဆုံးသူ ၄၄၇ ဦးရှိကြောင်း ကြေညာ
1:45 a.m. Israel Iron Dome မှ Beersheba သို့ ပစ်ခတ်သော ဒုံးအား အောင်မြင်စွာ ပြန်လည် ပစ်ခတ်ဖျက်ဆီး
1:32 a.m. Sha'ar Hanegev တွင်အရေးဥသြဆွဲသံများ နောက်ထပ်ပိုမိုကြားရ
12:59 a.m. US Secretary Kerry က July 21 to တွင် Egypt သို့သွားကာ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Jen Psaki နှင့်တွေမည်ဟုပြော
12:56 a.m Ashkelon, Kiryat Gat နဲ့ Shafir Regional Council တွင်အရေးဥသြဆွဲ
12:40 a.m. Hamas မှ Israel စစ်သားများ ဖမ်းဆီးကြောင်းပြောသော်လည်း Israel မှ မခိုင်လုံသေးကြောင်းပြော
12:30 a.m. Sha'ar Hanegev တွင်အရေးဥသြဆွဲ
12:25 a.m. U.N. Security Council တွင် ညဖက် အရေးပေါ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်
12:18 a.m. Sha'ar Hanegev Regional Council တွင်အရေးဥသြဆွဲသံ